Ilungelo lakho lokwazi | Local Government Action
Home » An Activist's Guide » Legal Framework » Your right to know
32(1) Wonke umuntu unelungelo lokuthola –
b) nanoma oluphi ulwazi olugcinwe omunye umuntu futhi oludingekayo ukuze kusetshenziswe noma kuvikelwe noma eliphi ilungelo.
Uhulumeni wasekhaya ngokomthetho uphoqelekile ukuthi uhlinzeke umphakathi ngolwazi olufana nemithetho kamasipala, izinqumo, amaminithi emihlangano, i-IDP nemibiko yokuphathwa kokwenziwa komsebenzi, phakathi kwamanye amarekhodi. Umphathi kamasipala unejoka lokugcina la marekhodi (isigaba 32 soMthethosisekelo; isigaba 117 soMthetho weziNhlaka zikaHulumeni).
Ukuze uthole ulwazi ngokuqondile, kumele ufake isicelo esibhaliwe esiqondiswe kumphathi kamasipala, noma umsebenzi oqokelwe umsebenzi wokukhipha noma wokuqinisekisa ukuthi ulwazi luyatholakala. Umasipala unejoka lokusiza abantu abangakwazi ukufunda noma ukubhala. Uma sewucele ulwazi qinisekisa ukuthi uthola impendulo! Njengoba ulwazi olumayelana nemithetho kamasipala noma imibiko kumele kutholakale ngaleso sikhathi, eminye imibhalo efana namaminithi noma izinqumo kungenzeka kuthathe isikhathi ukuyididiyela. Uma unganelisekile ngempendulo yesicelo sakho sokuthola ulwazi, faka isikhalo emkhandlwini kamasipala ngokuxhumana nehhovisi likasomlomo.
Indlela yokusebenzisa i-PAIA: Izinyathelo okumele zilandelwe uma kucelwa ulwazi
Uma benqaba nolwazi? Ungasebenza uMthetho wokuGqugquzela ukuThola uLwazi (PAIA). Qala, ubhale ucele imibhalo. Kodwa uma ungayitholi ufake isicelo ngaphansi kwe-PAIA. Abasebenzi bakumasipala kudingeka ukuthi basize abantu ngokubanika amafomu afanele ukuze bafake isicelo sokuthola ulwazi ngokusebenzisa i-PAIA kanye nanoma oluphi ulwazi oludingayo ukuze ufake isicelo sakho.
Ukuze uthole ukuthi sifakwa kanjani isicelo, buza abasebenzi bakuhulumeni wasekhaya ngokuthi bakunike imanuwali yolwazi yabo noma ubheke iwebhusayithi kamasipala wakho. Uma sewusifakile isicelo, umphathi kamasipala noma umsebenzi ogcina ulwazi kamasipala, kumele aphendule ezinsukwini eziyi-30. Bangacela ukungezelwa isikhathi ngezinsuku ezingama-30 uma kunemibhalo emikhulu noma uma ibekwe kwenye indawo okungeve kuyile abakuyo. Kodwa kumele bakutshele ngalokhu.
Uma uphikisana nesinqumo sokunqaba ukuphumelelisa isicelo sakho sokuthola ulwazi noma uma ufuna ukufaka isikhalo ngokungaphendula, ungafaka isicelo enkantolo ucele ukufaka isicelo “sokubuyekezwa kwesinqumo”. Uzodinga usizo lommeli kulesicelo. (Bheka isigaba 6 ngokusebenzisa izinkantolo)
Ngeshwa, inqubo yezokuphatha ngaphansi kwe-PAIA ayinamandla ngoba azikho izijeziso uma ungaphendulwa esicelweni sakho futhi asikho isikhungo sangaphandle esiqapha impendulo kahulumeni wasekhaya. Amalungu omphakathi avame ukungabi nesikhathi noma izinsiza zokulandela le nqubo aphonse ithawula. Ungenzi njalo! Uma unezinkinga kumele uthinte iKhomishana yamaLungelo aBantu yaseNingizimu Afrika, uMvikeli woMphakathi noma izinhlangano zamalungelo abantu ezingekho ngaphansi kukahulumeni (NGOs) ezifana ne-Freedom of Expression Institute (FXI) noma i-Open Democracy Advice Centre (ODAC).
Uma isicelo sakho solwazi sichithiwe noma singanikiwe ungafaka isikhalo. Lokhu kumele ukwenze zingakapheli izinsuku ezingama-60. Usodolobha noma umuntu oqokiwe kumele aphendule zingakapheli izinsuku ezingama-30. Uma ungayitholi impendulo ngesikhathi esinqunyiwe, uyothatha ngokuthi isikhalo sakho sichithiwe, bese udlulele esigabeni esilandelayo. Uma isikhalo sakho sichithiwe kumele uthole isinqumo esibhaliwe esinezizathu ezibandakanya izigaba ze-PAIA umasipala oncike kuzo ukuze unqabe ukukunika ulwazi.